Verenga Unamuno kuti udzidze kuve baba vakanaka | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo naMiguel de Unamuno.
Kudzidzisa vana hakusi nyore nguva dzose. Vabereki vazhinji vanobvuma kuti, kunyangwe ivo vaine ruzivo rwakawanda kubva kune vezvepfungwa kana vevadzidzisi, Kana zvasvika pakuisa rairo yake mukuita, dzidziso haiwanzo gadziridzwa kuti zviitwe.
Kune akawanda manyore asi pane dzimwe nguva apo zvinyorwa zvinokwanisa kudzidzisa zvinehunyanzvi maitiro evabereki kana havafanirwe kuita pamberi pevana vavo.
Rimwe remabhuku anofanirwa kurapwa seanoshamisa gwaro redzidziso nderekuti: "Amor y Pedagogía" naMiguel de Unamuno. Iyi nhoroondo inoratidzira kwatiri muchirongwa chayo izvo baba zvavasingafanire kuita nevana vavo.
Zano rebhuku rinotenderera pamurume, Don Avito, iyo inoti inounza hunyanzvi. Kune izvi, iye anotosarudza mumwe mukadzi anomutendera iye icho chinangwa. Kunyangwe iye pakupedzisira achidanana nemumwe mukadzi, María, uye aine mwanakomana naye, pfungwa yake yakavakirwa pachokwadi chekuti hunyanzvi hunogona kuitwa uye kuti kukwana kunogona kuwanikwa.
Nenhumbu iyi anodzidzisa mwanakomana wake, Apolodoro, mune zvese zvaanofunga zvakakosha kuti azadzise zvinangwa zvake, nekudaro achimuparadzanisa kubva kurudyi rwake rwekuve mwana. Kudzivisa, nekudaro, chero kusangana nechero izvo zvinogona kukanganisa dzidzo yavo. Iye anotoenda kumuganhu wekumunyima iye rudo rwaamai vake kuti adzivise iyo inogona kunge iri mune ramangwana kushaya simba.
"Rudo uye kudzidzisa" kuchiri kuwedzeredza kweizvo vabereki vazhinji vanoda nevana vavo. Chinhu chinoshamisa icho pane imwe nhanho, inodzokororwa kazhinji kazhinji kwazvo kana vana vakakweverwa kuita zviito, kudzidza maererano nematanho api kana kutora chikamu mune zvimwe zviitiko zvisiri zvavanofarira. Kungoti nekuti vabereki vanoona zvichibatsira mukukura kwavo uye kukura.
Chekupedzisira, zvinopedzisira zvave iye mukuru anotenda izvo zvakanakira mwana pasina kushamisika kana zviri zvekumufarira kana kwete. Don Avito anoda kuti mwanakomana wake ave shasha kuburikidza nekudzidza zvine hukasha. Chinangwa chake, zvine musoro, kuita zvakanaka kuna Apolodoro asi pakupedzisira haakwanise kuita shasha asi murombo.
Neichi chikonzero ini ndinofunga iri bhuku rakanaka revabereki vese, vane chinangwa chakanakisa pasirese, Ivo vanoda kuti vana vavo vave mumwe kana mumwe, asi ivo vanokanganwa, sezvinoita Don Avito, kuti ivo vanofara chaizvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Verenga Unamuno kuti udzidze kuve baba vakanaka
Iri rakanakisa bhuku iro rinonakidzwa uye rinodzidziswa ... ini ndinokukoka zvine hushamwari kublog rangu rezvinyorwa zvekuongorora un-libro-un-cafe.blogspot.com.co